बैंकमा जागिर गर्ने हो ? सानिमा बैंकले माग्यो कर्मचारी - Everest Dainik - News from Nepal
बैंकमा जागिर गर्ने हो ? सानिमा बैंकले माग्यो कर्मचारी
काठमाडौं, मंसिर १० । सानिमा बैंक लिमिटेडले आकर्षक पदका लागि कर्मचारी माग गरेको छ । उसले आज (सोमबार) सूचना जारी गर्दै विभिन्न आठ पदका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । थप जानकारीका लागि तलको सूचना हेर्नुस्-
याे पनि पढ्नुस अब बेरोजगारको चिन्ताबाट मुक्त हुनुहोस्, सानिमा बैंकले माग्यो कर्मचारी !
ट्याग्स: Bank Vacancy, sanima bank